Mourinho oo si dadban u weeraray tababare Klopp, kaddib guuldaradii ay xalay kala kulmeen Barcelona – Gool FM
Mourinho oo si dadban u weeraray tababare Klopp, kaddib guuldaradii ay xalay kala kulmeen Barcelona
(Yurub) 02 Maajo 2019. Macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa kaga faa’ideystay guuldaradii 3-0 ahayd ee xalay kasoo gaartay kooxda Liverpool uu hogaaminayo Jürgen Klopp dhigooda Barcelona, si uu u difaaco naftiisa, kaddib markii uu ku fashilmay waayihiisii Manchester United.
Mourinho ayaa si dadban u dhaleeceeyay macalinka reer Germany ee Jürgen Klopp, kaddib markii uu ku guuldareystay in wax koob ah uu kula guuleysto kooxda Liverpool, tan iyo imaatinkiisa garoonka Anfield.
Jose ayaa dhinaca kale tilmaamay sida ay layaab ula noqotay in kalsooni buuxda uu Jürgen Klopp ka heysto maamulka sare ee kooxda Liverpool, xili isagana laga ceyriyay shaqada Manchester United, inkastoo ay kula guuleystay seddex koob.
“Waxaan jecelahay inaan aado kooxda, isla markaana aan awood u yeesho inaan wax walba maamulo, tusaale ahaan, waxa au sameeynayaan Klopp iyo Pep”.
“Hadii aad fiiriso ciyaartoyda haatan ee kooxda Liverpool, imisa ciyaartooy ayaa joogtay Reds marka uu imaanahay Jürgen Klopp?”.
“Jürgen Klopp wuxuu wali joogaa kooxda, inkastoo uusan ku guuleysan wax koob, mudo dhan saddex sano iyo bar, hadana wuxuu heystaa kalsooni”.
“Xili ciyaareedkan wuxuu fursad u heystaa inuu koob ku guuleysto, hadii ay sidaas dhacdana waa markii ugu horeysay uu ku guuleysto”.
Sarri oo shaaca ka qaaday dhibaatada kaliya ee heysata kooxda Chelsea, kahor kulanka caawa ee Eintracht Frankfurt
"Waa idin baryaa Jaceylka kubbada cagta darteed yaan mardambe Messi lala bar-bardhigin midka No.7 u xirta Juventus."'. Mario Balotelli